Kolontsaina - Aseho amin’ny alalan’ny fampirantiana ny sanganasan-dRamily
« RAMILY ILAY NANAO NY MARAINA ». Io no lohahevitra amin’ity hetsika fampirantiana sary ity. Izany hoe, ny zavatra nataon-dRamily dia iainana amin’izao ary ankafizina ankehitriny. Hita taratra ao anatin’ny sariny izay hampirantiana eny amin’ny Hakanto Contemporary io tantara io.
Sarin-dRamily 46 hampirantiana
Tanterahina eny amin’ny Hakanto Contemporary Alhambra Gallery Ankadimbahoaka nanomboka ny Sabotsy 30 Aprily ka hatramin’ny 30 jolay 2022 izao ny fampirantiana manokana ny asa tanan’ny mpanakanto mpakasary Malagasy malaza Emile Rakotondrazaka, izay fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Ramily (1939-2017). Mahatratra 46 ireo sary hampirantiana mandritra io hetsika io.
Anisan’ny nanana ny naha izy azy teo amin’ny tontolon’ny sary Ramily. cc: Toria Dimbiniaina
Tanjona amin’izao hetsika fampirantiana izao ny fampahafantarana ny asa tanan-dRamily sy ny fisiany amin’ny maha mpanakanto nahavita be teto amin’ny Firenena azy. Namintina ny mombamomba an’dRamily sy ny sanganasany ny solotenan’ny fianakavian’dRamily, Rakotondrazaka Hery.
« Efa 2 taona no nanomanana ny fampirantiana manokana ny sarin’i Ramily.Vokatry ny fifanojoana teo amin’i Joel Andrianomearisoa sy ny taranany no niteraka izao fampirantiana izao. Ilay sary asa tanan’dRamily izay lasa nivadika zava-kanto no tena tiana havoitra amin’ity fampirantihana ity. Eo ihany koa ny fampahafantarana ny tantaram-piainan’i Ramily teo amin’ny lafiny fanaovana sary. Raha tsiahivina dia taoriana kely nahazoana fahaleovan-tena no nanombohany nanao sary. Niasa nahaleo tena i Ramily tamin’ny fanaovana sary ».
Tsara ny manamarika fa anisany mampiavaka ity asa tanana ity ihany koa ny sary rehetra hampirantiana ao dia asa tanan’i Ramily avokoa na « tirage unique », izany hoe mbola tsy misy fameranana famokarana na « reproduction » fa sary voatahirin’ny fianakaviany.
Nohamafisin’ny solotenan’ny fianakaviany ihany koa fa « tsy misy amidy ireo sary ireo fa mijanona vakoka mandrakariva ».